Dɛn Ne Yuda Asɛmpa No?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
APRIL 2006 mu no, wɔbɔɔ amanneɛ wɔ atesɛm nkrataa mu wɔ wiase afanan nyinaa sɛ nhomanimfo bi akohu tete nhoma bi a wɔato din “Yuda Asɛmpa,” na wɔde emu nsɛm rebɛto gua. Amanneɛbɔ no kae sɛ na nhomanimfo no kyerɛ sɛ nhoma a wɔakohu no bɛma nkurɔfo asesa wɔn adwene wɔ Yesu suani Yuda a oyii no mae no ho. Nhomanimfo no kyerɛ sɛ Yuda yɛɛ ade paa, na ɔno ne ɔsomafo a na ɔte Yesu asɛm ase yiye, na ɛno nti na oyii no mae ma wokum no sɛnea Yesu kae sɛ ɔnyɛ no.
Enti nhoma bi wɔ hɔ saa ampa? Sɛ ɛte saa a, ɛyɛ ampa sɛ ɛma yehu Yuda Iskariot, Yesu Kristo anaa tete Kristofo no ho nsɛm bi a ahintaw anaa? Ɛsɛ sɛ ɛma yɛsesa yɛn adwene wɔ Kristo nkyerɛkyerɛ ho anaa?
NEA ƐYƐE A WOHUU “YUDA ASƐMPA” NO
Nea ɛyɛe a wokohuu “Yuda Asɛmpa” no, obi nnim. Ɛnyɛ wɔn a wotutu fam hwehwɛ tetefo nneɛma mu na wokohuu saa nhoma no dii ho adanse; mmom, bɛyɛ 1970 ne 1980 hɔ baabi no, obiara anhu nea ɛyɛe a prɛko pɛ, ebepuee baabi a wɔtɔn tete nneɛma. Ɛbɛyɛ sɛ 1978 na wokohui wɔ Egypt, na ebetumi aba sɛ wohui wɔ ɔboda bi a wɔmfa nyɛ hwee mu. Nhoma anan bi a wɔde tete Egypt kasa bi kyerɛwee no, na ɛyɛ emu biako.
Wɔde aboa nhoma duraa ho koraa so kama mfe pii wɔ Egypt, nanso afei de na ayɛ mmerɛw na ɛresɛe ntɛmntɛm. Afe 1983 mu no, wɔde nhoma no kyerɛɛ nhomanimfo bi kakra, nanso na ne bo yɛ den, enti obiara antɔ. Esiane sɛ ɛsan daa hɔ kyɛe na wɔankora so yiye nti, afei de, na ɛresɛe koraa. Afe 2000 na Switzerlandni bea bi a ɔtotɔ tete nneɛma kɔtɔe. Nea ekosii ne sɛ, ɔdan maa animdefo bi a wofi amanaman pii so sɛ wɔnkeka nsisi anim na wɔnyɛ no yiye, efisɛ na ebi atetew nketenkete. Asoɛe abien bi (wɔfrɛ no Maecenas Foundation for Ancient Art ne National Geographic Society) na wɔhwɛɛ saa dwumadi no so. Saa animdefo no adwuma no bi ne sɛ wɔbɛhwɛ mfe dodo a nhoma no adi na wɔasan nso akyerɛ emu nsɛm no ase.
Nyansahu kwan bi a wɔde hu mfe a biribi adi a wɔfrɛ carbon-14 no, ɛno na wɔde huu mfe a nkyerɛwee no adi, na wohui sɛ wɔyɛe no, bɛyɛ mfe 1,700 ni. Nanso, nhomanimfo no kyerɛ sɛ “Yuda Asɛmpa” no, wɔkyerɛɛ ase fii Hela kasa mu kɔɔ Egypt kasa no mu akyɛ sen saa. Bere bɛn paa na wɔkyerɛw “Yuda Asɛmpa” no, na na nneɛma te dɛn saa bere no?
“YUDA ASƐMPA” NO—ƐYƐ ANIMADEFO ASƐMPA
Irenaeus yɛ nhoma kyerɛwfo a ɔtenaa ase bɛyɛ mfe 1,900 ni, na wɔkyerɛ sɛ ɔyɛ Kristoni. Ne nhoma bi kaa “Yuda Asɛmpa” no ho asɛm. Ne nhoma a wɔato din Against Heresies (Etia Awaefo) mu no, ɔka faa nkurɔfo bi a ɔne wɔn nkyerɛkyerɛ nhyia ho sɛ: “Wɔkeka sɛ Yuda a oyii [Yesu] mae no, na onim biribiara mu yiye, na esiane sɛ ɔno nko ara na onim nokware no nti, ɔno na otumi huu nea wɔn a aka no anhu na oyii no mae. Ɛnam no so na nneɛma a ɛwɔ soro ne asase so nyinaa yɛɛ basaa. Wɔnwenee saa anansesɛm yi frɛɛ no Yuda Asɛmpa.”
“Ɛnyɛ obi a onim Yuda na ɔkyerɛw Asɛmpa no wɔ [Yuda] bere so”
Animadefo Kristofo a wɔkyerɛ sɛ wɔayi nimdeɛ soronko bi akyerɛ wɔn no, Irenaeus de sii n’ani so paa sɛ ɔbɛbɔ wɔn nkyerɛkyerɛ no agu. Sɛ yɛka Animadefo a, egyina hɔ ma akuw pii a ebiara kura n’adwene ne ne nkyerɛkyerɛ wɔ Kristosom mu “nokware” ho. Animadefo no ankasa kyerɛwee nhoma ahorow, na ɛno na wɔnam so trɛw wɔn nkyerɛkyerɛ no mu wɔ asomafo no akyi.
Saa Animadefo no de wɔn nsɛmpa no kyerɛ sɛ, Yesu asomafo a na wɔbɛn no paa no ante ne nsɛm ase, na Yesu kaa ahintasɛm bi a wɔn mu kakraa bi na wɔtee ase. * Animadefo no bi wɔ hɔ a, na wogye di sɛ wiase a yɛwɔ mu yi yɛ afiase. Enti wɔkyerɛ sɛ “ɔbɔadeɛ nyame” a ne ho asɛm wɔ Hebri Kyerɛwnsɛm mu no, anyame foforo a wodi mũ no mpo yɛ kɛse sen no. Ne saa nti wɔkyerɛ sɛ obi a ɔwɔ nokware “nimdeɛ” na otumi te “ahintasɛm” yi ase, na ɔnam so srɛ sɛ wonnye no mfi honam mu.
Saa kwan no ara na wɔafa so ayɛ “Yuda Asɛmpa” no. Asɛm yi na wɔde fii ase: “Yesu ne Yuda Iskariot bɔɔ nkɔmmɔ nnawɔtwe kaa ahintasɛm kyerɛɛ no, na wowiei no, ne nnansa akyi na wodii Twam afahyɛ no.”
Nhoma a mfe pii no, na wosusuw sɛ ayera yi, ɛno ara na Irenaeus kyerɛw ho asɛm no anaa? Nnipa a wodii kan hwehwɛɛ nhoma no mu na wɔkyerɛɛ ase no, na Marvin Meyer ka ho, na ɔka sɛ Irenaeus “nsɛm kakra a ɔkae no ma yehu sɛ saa tete Egypt kasa mu nhoma a wɔfrɛ no Yuda Asɛmpa no, ɛno ara ho asɛm na na ɔreka.”
SƐNEA WƆAKA YUDA HO ASƐM WƆ ASƐMPA YI MU NO, NHOMANIMFO GYE HO AKYINNYE
“Yuda Asɛmpa” no mu no, wɔkyerɛ sɛ, sɛ Yesu asuafo no yɛ biribi kyerɛ sɛ wɔn nimdeɛ sua a, ɛyɛ a Yesu bu wɔn animtiaa, na ɔserew wɔn. Asomafo 12 no mu no, Yuda nko ara na na onim Yesu yiye. Enti Yesu kaa “ahenni no ho ahintasɛm” kyerɛɛ no wɔ kokoam.
Nea Irenaeus ka faa nhoma no ho no, wutumi hu sɛ na ɛwɔ nhomanimfo a wodii kan kyerɛɛ ase no adwenem, enti ɛkaa wɔn nkyerɛase no paa. Nhomanimfo no kae wɔ wɔn nkyerɛase no mu sɛ, na Yesu pɛ Yuda asɛm paa, efisɛ ɔno ne osuani a na ɔbɛte ahintasɛm ase, na ɔno na “ɔbɛkɔ” “ahenni” no mu. Asomafo a na wɔadaadaa wɔn no de, na wɔbɛpɛ obi ahyɛ Yuda anan, nanso na Yuda bɛba abɛyɛ “honhom a ɔto so dumiɛnsa,” na wɔkyerɛ sɛ “ɔbɛkyɛn [asuafo a wɔaka no] nyinaa,” efisɛ Yesu kae sɛ, “wode ɔhonam a edura me ho no bɛbɔ afɔre.”
Bart Ehrman ne Elaine Pagels yɛ nhomakyerɛwfo akukudamfo a wɔakyerɛw tete Kristosom ne Animadefo ho nsɛm pii. Ankyɛ na wotintim nhoma bi de kaa “Yuda Asɛmpa” no ho asɛm, na na wɔn nkyerɛkyerɛmu no te sɛ nhomanimfo no nkyerɛase no pɛpɛɛpɛ. Nanso ankyɛ na nhomanimfo foforo te sɛ April DeConick ne Birger Pearson nso kaa wɔn adwene. Asɛm a wɔkae ne sɛ National Geographic asoɛe no peperee wɔn ho de nea wɔkyerɛwee no too gua ntɛm dodo. Afei nso sɛnea wɔtaa yɛ no, anka ɛsɛ sɛ wɔde to hɔ ma afoforo hwehwɛ mu kɔ akyiri ka ho biribi ansa na wɔde ato gua, nanso wɔanyɛ no saa efisɛ na wɔama nhomanimfo no adi nsew sɛ wɔremmɔ so nkyerɛ obiara kosi sɛ wɔde bɛto gua.
Nhomanimfo no mu biara nni hɔ a ɔhwɛɛ nhoma no mu no, ɔkae sɛ emu nsɛm no yɛ abakɔsɛm a edi mũ
DeConick ne Pearson mu biara yɛɛ n’ankasa nkyerɛase foforo, na nea wɔn nyinaa kae ne sɛ nhoma no afã titiriw bi wɔ hɔ a, nhomanimfo a wodi kan no ankyerɛ ase yiye. DeConick nkyerɛase no mu no, ɔkae sɛ Yesu frɛɛ Yuda “Adaemone a ɔto so Dumiɛnsa” na ɛnyɛ “honhom a ɔto so dumiɛnsa.” * Afei nso ɔkyerɛ sɛ Yesu ka kyerɛɛ Yuda pen sɛ ɔrenkɔ “ahenni” no mu. Yesu anka Yuda ho asɛm sɛ “ɔbɛkyɛn” asuafo nkae no, mmom ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ebesi asuafo nkae no nyinaa yiye akyɛn wo. Efisɛ honam a edura me ho no, wode no bɛbɔ afɔre.” DeConick ani so de, “Yuda Asɛmpa” no yɛ tete Animadefo anansesɛm a edi asomafo no nyinaa ho fɛw. Ade biako a DeConick ne Pearson nyinaa adwene hyia wɔ ho ne sɛ “Yuda Asɛmpa” no mu nsɛm nkyerɛ sɛ Yuda yɛ onipa pa.
DƐN NA YEBETUMI ASUA AFI “YUDA ASƐMPA” NO MU?
Nhomanimfo a wobuu Yuda a ne ho asɛm wɔ asɛmpa yi mu sɛ ɔyɛ onipa pa ne wɔn a wobuu no sɛ adaemone no, wɔn mu biara nni hɔ a ɔhwɛɛ nhoma no mu no, ɔkae sɛ emu nsɛm no yɛ abakɔsɛm a edi mũ. Bart Ehrman kyerɛkyerɛ mu sɛ: “Nhoma no nyɛ Asɛmpa a Yuda kyerɛwee, na ɛnka biribiara mpo wom a ɛkyerɛ saa. . . . Ɛnyɛ obi a onim Yuda na ɔkyerɛw Asɛmpa no wɔ [Yuda] bere so . . . Enti ɛnyɛ nhoma a ebetumi ama yɛahu nneɛma bi a ɛkɔɔ so wɔ Yesu bere so.”
“Yuda Asɛmpa” no yɛ Animadefo nhoma a wɔde Hela kasa kyerɛwee wɔ asomafo no akyi. Ɛnnɛ yi nyinaa, nhomanimfo adwene nhyia sɛ ebia “Yuda Asɛmpa” a wɔahu no foforo yi, ɛno ara na Irenaeus kaa ho asɛm no anaa. Ne nyinaa mu no, “Yuda Asɛmpa” no yɛ adanse kɛse a ɛkyerɛ sɛ eduu baabi no na “Kristosom” asɛe, na emu apaapae ayɛ akuw nketenkete pii a obiara wɔ ne nkyerɛkyerɛ. “Yuda Asɛmpa” no mmɔ Bible mu nsɛm ngu. Mmom no, esi so dua sɛ nsɛm a asomafo no kae no yɛ nokware. Nsɛm no bi ne nea Paulo kae a ɛwɔ Asomafo Nnwuma 20:29, 30 yi: “Minim sɛ me kɔ akyi no, . . . mo ara mo mu na mmarima bɛsɔre akasa akyinkyim nsɛm de atwe asuafo no adi wɔn akyi.”
^ nky. 11 Wɔn a wobuu wɔn sɛ wɔtee Yesu nkyerɛkyerɛ ase paa no, wɔn na na wɔtaa de wɔn din to saa nsɛmpa no so; ebi ne “Toma Asɛmpa” ne “Maria Magdalene Asɛmpa” no. Sɛ yɛka ne nyinaa bom a, wɔahu nsɛmpa a ɛte saa bɛyɛ 30.
^ nky. 18 Nhomanimfo a wɔkyerɛ sɛ Yuda yɛ adaemone, kyerɛ sɛ obi a na onim Yesu kyɛn asuafo a aka no, wɔkyerɛ sɛ ɛte sɛ adaemone a Bible ka wɔn ho asɛm wɔ Nsɛmpa no mu no sɛ wotumi kyerɛɛ onipa pɔtee a Yesu yɛ.—Marko 3:11; 5:7.